बर्राचौर र रानीपानीमा एमालेका उम्मेदवारप्रति एमाले नै रुष्ट
adminBharat 11 months ago 246
पर्वत, २२ वैशाख ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पर्वतका सबै तहका उम्मेदवार आक्रामक रुपमा प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । गत मंगलबार जिल्लामा रहेका सात स्थानीय तहका उम्मेदवारले सातै स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्, भने स्वतन्त्रका कतिपय उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिईसकेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलका स्थानीय संयन्त्रले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेपछि क्षेत्रीय र जिल्ला तहले गरेको उम्मेदवार छनोटको निर्णयप्रति भने स्थानीय नेता कार्यकर्ता नै रुष्ट रहेका छन् । ६ वडा मिलेर बनेको विहादी गाउँपालिकाको वडा नं. २ बर्राचौर र वडा नं. ३ रानीपानीमा एमालेले वडाध्यक्षमा छनोट गरेका उम्मेदवारप्रति स्थानीय नेता तथा एमाले समर्थक कार्यकर्ता नै रुष्ट बनेका हुन् ।
एमालेले वडा नं. ३ रानीपानीमा लोकबन्धु पराजुली र वडा नं. २ बर्राचौरमा ओमप्रसाद कुँवरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । विहादी गाउँपालिकाको नेतृत्वका लागि हात धोएर लागिपरेका कुँवरले टिकट नपाएपछि एमालेले उनलाई मनोनयनकै दिन वडाध्यक्षमा थन्काएको थियो । बर्राचौर एमालेले पहिले नै टमबहादुर नेपालीलाई वडाध्यक्षको लागि सिफारिस गरेको र जिल्ला कमिटिले कुँवरलाई टिकट दिएपछि एमालेका कार्यकर्ता नै आक्रोशित बनेका हुन् । प्रायजसो राजधानीमै बसोबास गर्ने कुँवर चुनावको समयमा गाउँ आएका हुन् । राजधानीमा होटल व्यवसाय गर्ने कुँवरले शक्तिको आडमा टिकट ल्याएको स्वयं एमालेकै कार्यकता स्विकार्छन् । उनले टिकट पाएसँगै ईमान्दार र सक्रिय कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । पार्टीले योगदान र मूल्यांकनको कदर नगरेको भन्दै कार्यकर्ता निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् ।
उता, रानीपानीमा एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार दिएका लोकबन्धु पराजुली पनि प्रायजसो काठमाण्डौमा नै बसोबास गर्दै आईरहेका छन् । पारिवारिक पृष्ठभुमि कांग्रेस रहेका पराजुलीलाई एमालेभित्रै अविश्वास रहेको स्थानीय कार्यकर्ताले बताउँछन् । २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट तत्कालीन रानीपानी गाविसको उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहेका पराजुली एमालेका ईलबहादुर क्षेत्रीबाट पराजित भएका थिए । २०५४ मा कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका पराजुलीलाई हाल एमालेले वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएसँगै एमालेकै ईलबहादुर क्षेत्रीले स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिईसकेका छन् ।
मौरीपालनमा रमाउँदै बाच्छाका उत्तम परियार 50
विहादी गाउँपालिकाको केन्द्र माझगाउँमा सार्न जनप्रतिनिधीहरुको माग 63
अझै लुकाउँछन् महिलाले समस्या 84
जनकल्याण मा.बि.को स्वर्ण महोत्स शुरु 65
बजेट आधाभन्दा बढी सडकमा 94
बिहादीका भूकम्पपीडितको पीडा:कार्ड छ,अनुदान छैन 153
प्रदेश ४ मा किरियापुत्री कमल भुषालले गरे मतदान 200
विहादी धार्मिक महोत्सवको आयव्यय सार्वजनिक गरिने 233
गर्भ रहेको थाहा पाएपछि प्रेमिकाको हत्या 409